I-China Tube Automatic Labeling System fektri nabaphakeli | I-Kang Weishi Medical Ithuluzi
Uhlelo lokufaka amalebula e-automatic tube lusetshenziswa ikakhulu ezindaweni zokuqoqwa kwegazi njengezigceme zesibhedlela, imitholampilo ephuma kanye noma izivivinyo zomzimba. Luhlelo oluzenzakalelayo lokuqoqwa kwegazi oluzenzakalelayo oluhlanganisa ulayini, ukukhethwa kwamathambo ahlakaniphile, ukuphrinta kwelebuli, ukunamathisela nokusabalalisa.
Uhlelo lokufaka amalebula e-automatic tube lusetshenziswa ikakhulu ezindaweni zokuqoqwa kwegazi njengezigceme zesibhedlela, imitholampilo ephuma kanye noma izivivinyo zomzimba. Luhlelo oluzenzakalelayo lokuqoqwa kwegazi oluzenzakalelayo oluhlanganisa ulayini, ukukhethwa kwamathambo ahlakaniphile, ukuphrinta kwelebuli, ukunamathisela nokusabalalisa. Uhlelo nesibhedlela i-LIS / HIS networking, ifunda ikhadi lezokwelapha isiguli, ithola imininingwane neziguli ezihlobene neziguli, ikhethe amashubhu wokuhlola imibala ehlukene kanye nemininingwane ethile, imininingwane yokuphrinta isiguli nezinto zokuhlola, ukunamathisela amashubhu wokuhlola ngokuzenzakalela, ukuqinisekisa ukuhleleka kwezokwelapha, isiguli imininingwane, ukuqoqwa kwegazi nokuqukethwe kulo mbono kuhambisana ngokuphelele futhi kuphephile.
Uhlelo lokuphatha ukuqoqwa kwegazi okuhlakaniphile lunezingxenye ezine ezilandelayo:
Uhlelo oluvalelayo nolunezinombolo, uhlelo lokurekhoda oluzenzakalelayo lwe-tube, isistimu yokuhlola i-tube yokudlulisa nohlelo lokuzenzakalelayo lokuhlola uhlobo lokuhlola.
Indlela engaphansi ngayinye inomsebenzi wokuthi isetshenziswe yodwa noma inhlanganisela. Uhlelo lolu lusetshenziswa ikakhulu ezikhungweni zokuphuma ezibhedlela, ezikhungweni zokuhlolwa kwezempilo nakwezinye izindawo eziqoqelwa khona igazi.
1. Iziguli zilungiselela ukufonela inombolo.
2. Isineke silinde ucingo
3. Umhlengikazi ubiza isiguli ukuthi siye efasiteleni siyolanda igazi ukuze likhombe.
4. Uhlelo lokuhlola oluzenzakalelayo lokufaka amalebula luthola i-tube ukuthatha, ukuphrinta, ukunamathisela, ukubukeza, ukukhipha i-tube, futhi isetshenziswa ngokuqondile ngabahlengikazi ukuqoqa igazi.
5. Umhlengikazi ufaka i-tube yokuhlola igazi eliqoqiwe ebhande lokuhambisa futhi alidlulisele ohlelweni lokuhlola oluzenzakalelayo lwe-test.
6. Uhlelo lokuzicubungula oluzenzakalelayo lwe-tube luhlelwa ngokuzenzakalela ngokuya ngamashubhu wokuhlola asethelwe bese lunikezwa ngokuzenzakalela egumbini ngalinye lokuhlola.
1. Idizayini esezingeni eliphansi yohlelo lokuphathwa kokuqoqwa kwegazi okuhlakaniphile, uhlelo olungaphansi ngalunye lungakhiwa noma lusetshenziswe ngokuhlukile.
2. Iwindi lokuqoqa igazi lihlonyelwe nge-othomathikhi yokurekhoda okuzenzakalelayo yokufaka ilebula, idivaysi ngayinye isebenza ngokufana, ayithinti omunye nomunye, futhi ingandiswa njengoba kudingeka.
3. Ijubane lokuhlunga kwe-tube lishesha, kunezigaba eziningi zokuhlunga.
4. Amadivaysi amaningi wokufaka amalebula asebenza ngasikhathi sinye, futhi ijubane lokusebenzisa iyunithi elilodwa liyashesha (imizuzwana engu-≤4 / igatsha) ukufeza izidingo zokuqoqwa kwegazi okuphezulu kwesibhedlela.
5. Uhlelo lokulebula aludingi ukumiswa, futhi amashubhu wokuhlola angangezwa nganoma yisiphi isikhathi.
Esedlule: I-OEM / ODM Factory Remi Centrifuge 4 Tubes - Tube Elahlekile ye-VTM - Kang Weishi
Olandelayo: Izinaliti Zenaliti Yohlobo Lokuqongelelwa Kwegazi
Izinaliti Zenaliti Yohlobo Lokuqongelelwa Kwegazi